Amụma Nzuzo - SunTrust Blog
Amụma Nzuzo a na-achịkwa etu suntrustblog.com si anakọta, jiri, na-echekwa ma na-ekpughe ozi anakọtara site na ndị ọrụ (nke ọ bụla, “Onye ọrụ”) nke weebụsaịtị www.usanewscourt.com (“Site”). Iwu nzuzo a na-emetụta Saịtị na ngwaahịa na ọrụ niile nke Spec Price Nigeria na-enye.
Personal njirimara ọmụma
Anyị nwere ike ịnakọta ozi njirimara nke ndị ọrụ na ụzọ dịgasị iche iche, gụnyere, mana ọnweghị oke, mgbe ndị ọrụ gara na saịtị anyị, nye iwu, denye aha na akwụkwọ akụkọ, dejupụta ụdị, yana n'ihe metụtara ọrụ ndị ọzọ, ọrụ, atụmatụ ma ọ bụ ihe onwunwe anyị na-eme ka anyị dị na saịtị anyị.
Enwere ike ịgwa ndị ọrụ maka, dịka o kwesiri, aha, adreesị ozi-e. Ndị ọrụ nwere ike, gaa na saịtị anyị n’amaghị ama. Anyị ga-anakọta ozi njirimara nkeonwe n'aka ndị ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ha jiri aka ha nyefee anyị ozi dị otú ahụ. Ndị ọrụ nwere ike jụ mgbe niile iji nweta ozi njirimara nkeonwe, belụsọ na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ụfọdụ ọrụ metụtara saịtị.
Non-Personal Identification ọmụma
Anyị nwere ike ịnakọta na-abụghị onye njirimara ọmụma banyere Users mgbe ọ bụla ha mmekọrịta na anyị na saịtị. Non-Personal Identification ọmụma pụrụ ịgụnye ihe nchọgharị aha, ụdị nke na kọmputa na oru ihe ọmụma banyere ọrụ n'aka na njikọ aka anyị na saịtị, dị ka sistemụ arụmọrụ na Internet na enye ọrụ tinye n'ọrụ na ndị ọzọ yiri ọmụma.
Web nchọgharị kuki
Anyị Site nwere ike-eji "kuki" aka onye ọrụ ahụmahụ. Onye ọrụ nchọgharị na weebụ nsị kuki na ha siri ike mbanye n'ihi ndekọ-edebe nzube na mgbe ụfọdụ soro ọmụma banyere ha. Onye ọrụ nwere ike ịhọrọ ka ha nchọgharị weebụ na-ajụ kuki, ma ọ bụ ịgwa ndị ị na mgbe kuki a na-zitere. Ọ bụrụ na ha emee otú ahụ, mara na akụkụ ụfọdụ nke saịtị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
Olee otú anyị na-eji anakọtara ọmụma
Usanewscourt na-anakọta ma jiri ndị ọrụ nkeonwe ihe eji eme ihe maka ebumnuche ndị a:
- Iji hazie ahụmịhe onye ọrụ: Anyị nwere ike iji ozi na mkpokọta iji ghọta otu ndị ọrụ anyị dị ka otu na-eji ọrụ na akụrụngwa enyere na Saịtị anyị.
- Iji melite Saịtị anyị: Anyị na-agbasi mbọ ike iji melite onyinye weebụsaịtị anyị dabere na ozi na nzaghachi anyị natara n'aka gị.
- Iji melite ọrụ ndị ahịa: Ozi gị na-enyere anyị aka ịzaghachi nke ọma maka arịrịọ ndị ahịa gị na mkpa nkwado.
- Iji hazie azụmahịa: Anyị nwere ike iji ozi Ndị ọrụ na-enye banyere onwe ha mgbe ị na-etinye iwu naanị iji nye ọrụ na iwu ahụ. Anyị anaghị ekekọrịta ozi a na ndị ọzọ ma ọ bụghị ruo n’ókè dị mkpa iji nye ọrụ ahụ.
- Iji dọọ ọdịnaya, nkwalite, nyocha ma ọ bụ atụmatụ saịtị ndị ọzọ: Iji zipu ndị ọrụ ọrụ ha kwenyere ịnata banyere isiokwu anyị chere ga-amasị ha.
- Iji zipu ozi ịntanetị n'oge: Adreesị ozi-e ndị ọrụ nyere maka nhazi nhazi, a ga-eji ya zigara ha ozi na mmelite metụtara usoro ha. Enwere ike iji ya zaghachi ajụjụ ha, yana / ma ọ bụ arịrịọ ma ọ bụ ajụjụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Onye ọrụ kpebiri ịbanye na listi nzipu ozi anyị, ha ga-enweta ozi ịntanetị nke nwere ike ịgụnye akụkọ ụlọ ọrụ, mmelite, ngwaahịa ma ọ bụ ozi ọrụ metụtara, wdg.
Olee otú anyị chebe gị ọmụma
Anyị na-enwe ihe kwesịrị ekwesị data collection, nchekwa na nhazi omume na nchebe na-echebe megide n'enweghị ikike ohere, mgbanwe, ngosi ma ọ bụ mbibi nke ozi nkeonwe gị, aha njirimara, paswọọdụ, azụmahịa ọmụma na data echekwara anyị na saịtị.
Ịkekọrịta gị ozi
Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ ịgbazite ozi njirimara nke ndị ọzọ na ndị ọzọ. Anyị nwere ike kesaa ozi igwe mmadụ na-ekpokọta ekpokọtara na-ejikọghị na ozi njirimara ọ bụla gbasara ndị ọbịa na ndị ọrụ anyị na ndị mmekọ azụmahịa, ndị mmekọ ntụkwasị obi na ndị mgbasa ozi maka ebumnuche edepụtara n'elu.
Anyị nwere ike iji ndị na-enye ọrụ ndị ọzọ nyere anyị aka ịrụ ọrụ anyị na Saịtị ma ọ bụ nye ọrụ maka nnọchite anyị, dị ka izipu akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nyocha. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị na ndị ọzọ a maka ebumnuche ndị ahụ pere mpe ma ọ bụrụhaala na ị nyere anyị ikike gị.
Nke atọ weebụsaịtị
Ndị ọrụ nwere ike ịchọta mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na saịtị anyị nke jikọtara na saịtị na ọrụ nke ndị mmekọ anyị, ndị na-ebubata ya, ndị mgbasa ozi, ndị na-akwado ya, ndị nyere ikikere na ndị ọzọ. Anyị anaghị achịkwa ọdịnaya ma ọ bụ njikọ dị na saịtị ndị a ma ọ bụghị ha maka omume ndị nrụọrụ weebụ jikọtara ma ọ bụ site na saịtị anyị.
Na mgbakwunye, saịtị ma ọ bụ ọrụ ndị a, gụnyere ọdịnaya na njikọ ha, nwere ike na-agbanwe mgbe niile. Saịtị na ọrụ ndị a nwere ike ịnwe amụma nzuzo ha na amụma ọrụ ndị ahịa. Nchọgharị na mmekọrịta na weebụsaịtị ọ bụla ọzọ, gụnyere weebụsaịtị nke nwere njikọ na saịtị anyị, dị n'okpuru usoro nke usoro weebụsaịtị ahụ.
Mgbasa ozi igosi na anyị na saịtị nwere ike inye ya Users site mmekọ mgbasa ozi, onye nwere ike ịtọ kuki. Kuki ndị a ka ndị ad nkesa chọpụta kọmputa gị oge ọ bụla ha ezitere gị otu online advertisement ikpokọta-abụghị onye njirimara ọmụma banyere gị ma ọ bụ ndị ọzọ ndị na-eji kọmputa gị. Ozi a na-enye ohere netwọk mgbasa, ihe ndị ọzọ, napụta mgbasa ozi ezubere iche ha kweere ga-nke kasị ịmasị gị. Nke a na iwu nzuzo anaghị ekpuchi ndị ojiji nke kuki site ọ bụla akpọsa ngwá ahịa.
Google nwere ike ijere ụfọdụ n'ime mgbasa ozi ahụ. Ojiji Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ dabere na nleta ha na saịtị anyị na saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị. DART na-eji “ozi amata nkeonwe” ma Ọ B trackGH NOT esite na ozi gbasara gị, dị ka aha gị, adreesị ozi-e, adreesị anụ ahụ, wdg. You nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na mgbasa ozi Google na ọdịnaya netwọk nzuzo amụma na http://www.google.com/privacy_ads.html
Mgbasa ozi mmemme Mediavine
Maka ozi gbasara nchikọta data nke ndị mmekọ mgbasa ozi Mediavine tinyere otu esi apụ na nnakọta data, biko pịa Ebe a
Suntrustblog.com nwere ezi uche iji melite iwu nzuzo a n'oge ọ bụla. Mgbe anyị mere, anyị ga-agụgharị ụbọchị emelitere na ala nke ibe a.
Anyị na-agba ndị ọrụ ume ka ha nyochaa peeji a oge niile maka mgbanwe ọ bụla ka a mata gị otu anyị si enyere aka ichedo ozi nkeonwe anyị na-anakọta. Acknow kwenyere ma kwenye na ọ bụ ọrụ gị iji nyochaa iwu nzuzo a kwa oge ma mara maka mgbanwe.
Gị nabata nke usoro ndị a
Site n'iji Saịtị a, ị gosiputara nnabata nke usoro a na usoro ọrụ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na iwu a, biko egbula saịtị anyị. Gị n'ihu ojiji nke saịtị na-eso ikenye nke mgbanwe a iwu ga-lere gị nnabata nke mgbanwe ndị ahụ.
Osisi kacha mma 2022 Gburugburu ụwa yana atụmatụ ha mara mma
SUV kacha mma maka ịkwọ ụgbọ ala 2022 gbajiri agbawa n'okporo ụzọ dị elu
Ndepụta nke Top 22 Kachasịnụ na nnukwu nnukwu ụlọ ahịa na America 2022 ị kwesịrị ịga
Otu esi atụgharị aha azụmaahịa 2022: Usoro na ọnụ ahịa kacha mma